Frozen Keyboard Pro Developer – Ko Thiha Aye Kyaw ~ တော်ဝင်မင်းသားလေး (နည်းပညာ)
Frozen Keyboard Pro Developer – Ko Thiha Aye Kyaw
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် ၂၀၁၃ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Android မြန်မာစာကီးဘုတ် “Frozen Keybord Pro” version အသစ် 0.3.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Frozen Keyboard ကတော့ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ယခု Pro version မှာတော့ ဒီဇိုင်းကလည်းအရင် Frozen keyboard ထက်ပိုပြီး သပ်ရပ်လှပတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro ရဲ့အသွင်အပြင်ကို Android 4.0 အထက်ဖုန်းတွေရဲ့ Default
Keyboard ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ယခု Frozen Keyboard Pro မှာတစ်ချို့သော မြန်မာစာလုံးပေါင်းများကို shift key ရိုက်၍အချိန်မကုန်ရအောင် key တစ်ခုချင်းစီကို long press နှိပ်ထားရုံနဲ့ Shift နဲ့တွဲရိုက်ရမယ့် အက္ခရာများကို Pop-up key အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro ကိုရေးသားသူကတော့ Android Developer ကိုသီဟအေးကျော် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Android users များအတွက် Developer ကိုသီဟအေးကျော်ရဲ့
ကြိုးပမ်းမှုများက ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro ဟာ မြန်မာစာရိုက်ဖို့သာဖြစ်ပြီး မြန်မာလိုဖတ်ရှုဖို့ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Android ဖုန်း/Tablet များမှာ ဇော်ဂျီမြန်မာစာ font သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro v0.3.0 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Frozen Keyboard Pro v 0.3.0 for Android အားရယူရန် (Direct Download Link)
Google Play မှ download ရယူချင်သူများကတော့ အောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Frozen Keyboard Pro v 0.3.0 for Android အားရယူရန် (Google Play Link)
အဆင်မပြေတာလေးများရှိပါက Chatbox သို့မဟုတ် presidentkoko007@gmail.com သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်းဗျ.ရောက်လာသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
<!-local time clock widget - html code - localtimes.info --> မြန်မာစံတော်ချိန်<!-end of code-->
tawwinminntharlay.com. Powered by Blogger.
Copyright © တော်ဝင်မင်းသားလေး (နည်းပညာ) | Powered by Blogger